Saf-it: Kudar Qolka Sugitaanka Tooska ah Mareegahaaga si aad u Maareyso Gaadiidka Sarreeya | Martech Zone
Queue-it: Ku dar Qol Sugitaan Toos ah Mareegahaaga si aad u maamusho Gaadiid badan
Jimco, Febraayo 4, 2022 Jimco, Febraayo 4, 2022 Douglas Karr
Ma qaadan karno amar... goobta waa go'an sababtoo ah waxay ku sii xumaanaysaa taraafig.
Kani marna maaha ereyada aad rabto inaad maqasho haddii aad waligaa qayb ka ahayd soo saarista badeecada, iibinta khadka tooska ah, ama iibinta tigidhada dhacdo… awood la'aanta in la cabbiro kaabayaashaaga sida ugu dhakhsaha badan ee baahida ugu dhacdo goobtaada waa masiibo tirada sababaha:
Niyad-jabka Booqdaha - Ma jiro wax u dhib badan sida garaacista qaladka qoraalka marar badan oo ku saabsan goobtaada. Soo-booqdaha niyad jabsan ayaa caadi ahaan soo booda oo soo laaban maayo… taasoo keentay in la garaaco astaantaada iyo dakhliga lumay.
Dalabka Adeegga Macmiilka - Booqdeyaasha niyad jabsan waxay keenaan iimaylo xanaaqsan iyo wicitaanno taleefan, iyagoo cashuuraya kooxda adeegga macaamiisha ee gudaha.
Baahida Bot Xun - Waxaa jira tiro ciyaartoy xun ah halkaas oo qalab qoraal ah si ay uga faa'iidaystaan ​​​​dhacdooyinkan. Tusaale ahaan waa kuwa madaxa-shaqeeya oo raba inay iibsadaan tigidho badan oo riwaayad caan ah. Bots-ku way aasi karaan goobtaada oo way tirtiri karaan alaabtaada.
Cadaalada Macmiilka - Haddii goobtaadu ay kor iyo hoos u socoto, booqdayaashaada ugu horreeya ayaa laga yaabaa inay awoodi waayaan inay beddelaan oo booqdeyaasha dambe ay awoodi karaan. Tani, mar kale, waxay dhaawici kartaa sumcadda sumaddaada.
Waxaa jira xalal la miisaami karo oo shirkado badani ay geeyaan si ay isugu dayaan inay dejiyaan qulqulka iyo kor u kaca baahida goobtaada. Si kastaba ha ahaatee, kuwani waxay noqon karaan kuwo qaali ah iyo kuwo aan awood u lahayn jawaab degdeg ah. Fikrad ahaan, xalku waa in safka booqdayaashaada. Taasi waa, booqdayaasha waxaa lagu jiheeyaa qolka sugitaanka ee goobta dibadda ilaa ay awoodaan
Waa maxay Qolka Sugidda Tooska ah?
Gaadiidka sare u kaca, macaamiisha safka loo galiyay waxay geli karaan mareegahaaga iyagoo sii maraya qolka sugitaanka si cadaalad ah, ugu horaysa. Qolka sugitaanka tooska ah wuxuu bixiyaa khibrad isticmaale oo togan, wuxuu ilaaliyaa sumcadda summadaada, wuxuu baabi'iyaa xawaaraha bots-yada xun iyo faa'iidada mugga. Waxaad hubisaa in alaabtaada ama tigidhadaadu ay ku dhamaanayaan gacmaha macaamiisha iyo taageerayaasha dhabta ah.
Saf-It: Qolka Sugitaankaaga Virtual
Saf-waa waa horumariye hormuud u ah adeegyada qolka sugitaanka tooska ah si loo xakameeyo mareegaha iyo taraafikada app-ka isagoo ka saaraya booqdayaasha qolka sugitaanka. Madalkeeda SaaS ee awoodda leh waxay u saamaxdaa shirkadaha iyo dawladaha adduunka inay ku hayaan nidaamkooda khadka iyo booqdayaasha, iyagoo qabsanaya iibinta muhiimka ah iyo dhaqdhaqaaqa khadka maalmaha ganacsiga ugu muhiimsan.
Que-waa waxay ku siinaysaa inaad maamusho meelaha ugu sarreeya ee taraafikada internetka ee khatarta ku ah inay burburaan goobtaada. Ku-soo-booqdayaasha gelinta qolka-sugidda-koowaad, ee-soo-baxa koowaad waxay ka dhigaysaa mareegahaaga inuu u shaqeeyo sida ugu wanaagsan marka ay ugu muhiimsan tahay.
Saf-waa waxaa haga cilmi-baaristii cilmi-nafsiga safka ugu dambeeyay si dadka ku soo booqda ay saf ugu jiraan oo ay u siiyaan khibrad togan. Isgaadhsiinta wakhtiga-dhabta ah, wakhtiga sugitaanka ee soo bandhigay, ogaysiisyada iimaylka, qolalka sugitaanka ee la bedeli karo, iyo habka ugu horeeya ee bixida waxa aad macaamiishaada siinaysaa sugitaan, sharaxan, dhamaystiran, iyo cadaalad ah.
Waxaa jira habab aan caddaalad ahayn oo gardarro ah oo lagula tacaalayo taraafikada internetka ee culus. Queue-it, waxaad hubisaa khibrad isticmaale oo togan oo aad ilaaliso daacadnimada summadaada. Macaamiishu waxay ku gelayaan mareegahaaga si cadaalad ah, ugu horaysa.
Isticmaalka Queue-waxa ay xaqiijisay cadaalada khadka inta lagu guda jiro ololaha baahida sare leh iyo hawlaha balaayiin isticmaalayaasha adduunka oo dhan ah. Isku day safka-waa qolka sugitaanka oo saham waxa ay u qaban karto degelkaaga ama abkaaga aadka ah.
Ku Saxeex Si aad Tijaabo Bilaashka ah ula socoto Queue-it
Tags: kor u kaca iibka onlinesaf-waaiibka tigidhada oo kordhaysocodka gaadiidkasocodka gaadiidkasafka farsamadaqolka sugitaanka qaabaysansafka mareegahaqolka sugitaanka website
ReferralCandy: Qaabka Gudbinta Ecommerce oo Dhamaystiran oo aad ku Daahfuri karto Daqiiqado gudahood